HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
Tsy misy mahalala ny tena bika aman’endrik’i Jesosy. Izy rahateo tsy nampanao sary hoso-doko na sary sokitra mampiseho ny tenany. Efa hatry ny ela anefa no ahitana ny sariny ny sangan’asan’ny mpanao zavakanto maro.
Mazava ho azy fa tsy fantatr’izy ireny hoe hoatran’ny ahoana marina i Jesosy. Arakaraka ny kolontsaina sy ny zavatra ninoana tamin’izany no nanaovana an’ilay sary matetika. Niankina tamin’izay tian’ilay olona nampanao azy koa ilay izy. Mety ho nisy vokany tamin’ny fiheveran’ny olona an’i Jesosy sy ny fampianarany anefa ireny sangan’asa ireny.
Misy mpanao zavakanto mampiseho an’i Jesosy ho toy ny olona malezolezo, malahelohelo, lava volo, na misy volombava manify. Indraindray koa izy aseho ho toy ny zavaboary ara-panahy misy faribolana mazava eo amin’ny lohany, na toy ny olona tia mitokantokana. Hoatr’izany tokoa ve i Jesosy? Mety hanampy antsika hahalala ny marina ireo andininy miresaka azy ao amin’ny Baiboly.
“NANOMANA VATANA HO AHY IANAO”
Toa tamin’i Jesosy natao batisa no niteny an’ireo, tao amin’ny vavaka. (Hebreo 10:5; Matio 3:13-17) Vatana hoatran’ny ahoana no nomena azy? Hoy ny anjely Gabriela tamin’i Maria, 30 taona teo ho eo talohan’izay: “Hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy ... izay Zanak’Andriamanitra.” (Lioka 1:31, 35) Lehilahy lavorary àry i Jesosy, toa an’i Adama tamin’izy vao noforonina. (Lioka 3:38; 1 Korintianina 15:45) Tsy maintsy ho bikàna izy, ary mety ho nitovy endrika tamin’i Maria reniny, izay vehivavy jiosy.
Nisy volombava hoatran’ny Jiosy rehetra i Jesosy, fa tsy toy ny Romanina. Noheverina ho nanan-kaja ny olona nisy volombava tamin’izany. Azo antoka fa voahety tsara sady tsy lava be ny volombavan’i Jesosy. Toy izany koa ny volony. Ny Nazirita, toa an’i Samsona, ihany no tsy nanapa-bolo.—Nomery 6:5; Mpitsara 13:5.
Efa an-taonany maro i Jesosy no nandrafitra, talohan’izy 30 taona. (Marka 6:3) Mbola tsy nisy fitaovana elektrika tamin’izany. Azo antoka àry fa nofosana izy. Tamin’izy vao nanomboka ny fanompoany, dia “noroahiny hiala tao amin’ny tempoly izay rehetra niaraka tamin’ny ondry sy omby, ary nararany ny vola madiniky ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabany.” (Jaona 2:14-17) Olona matanjaka vao hahavita an’izany samirery. Nampiasain’i Jesosy hanaovana ny asa nanirahan’Andriamanitra azy ny vatana nomena azy. Hoy izy: “Tsy maintsy mitory ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra any amin’ny tanàna hafa koa aho, fa izany no nanirahana ahy.” (Lioka 4:43) Nilana hery be ny nandeha an-tongotra nitory an’io hafatra io eran’i Palestina.
“MANKANESA ATỲ AMIKO ... FA HAMELOMBELONA ANAREO AHO”
Nahasarika an’ireo ‘niasa mafy sy navesatra entana’ io fanasan’i Jesosy io. Sariaka sy nahafinaritra mantsy izy. (Matio 11:28-30) Tsara fanahy koa i Jesosy, ka vao mainka velombelona ireo te hianatra momba azy. Na ny ankizy aza te hanatona azy. Hoy ny Baiboly: “Nitrotro an’ireo zaza izy.”—Marka 10:13-16.
Tsy olona nalahelohelo i Jesosy, na dia nijalijaly aza izy talohan’ny nahafatesany. Nanova ny rano ho divay tena tsara izy nandritra ny fampakaram-bady iray tany Kana. (Jaona 2:1-11) Nanatrika fanasana hafa koa izy, ary nampita lesona tena lehibe tamin’ireny fotoana ireny.—Matio 9:9-13; Jaona 12:1-8.
Noho ny hafatra notorin’i Jesosy, dia afaka nanantena ny hiaina mandrakizay ireo nihaino azy. (Jaona 11:25, 26; 17:3) “Faly be” i Jesosy rehefa nitantara taminy ny zavatra hitany teny am-pitoriana ny mpianany 70. Hoy izy: ‘Mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.’—Lioka 10:20, 21.
“TSY TOKONY HO TAHAKA IZANY IANAREO”
Nanampatra fahefana sy tia nisarika ny sain’ny olona tamin’ny tenany, ny mpitondra fivavahana tamin’ny andron’i Jesosy. (Nomery 15:38-40; Matio 23:5-7) I Jesosy kosa tsy hoatr’izany. Nilaza tamin’ny apostoliny izy mba tsy ‘hanjakazaka’ amin’ny olona. (Lioka 22:25, 26) Nampitandrina azy ireo izy hoe: “Mitandrema amin’ny mpanora-dalàna, izay tia mandehandeha manao akanjo lava, sady tia ny hoarahabaina eny an-tsena.”—Marka 12:38.
I Jesosy kosa tsy tia sehoseho, ary indraindray aza izy tsy fantatr’olona akory. (Jaona 7:10, 11) Tsy niavaka be koa ny paoziny, raha noharina tamin’ireo apostoly 11 tsy nivadika. Nanoroka azy àry i Jodasy mpamadika, mba ‘hamantaran’ny’ vahoaka hoe izy no Jesosy.—Marka 14:44, 45.
Tsy hoatran’ireny amin’ny sary ireny àry i Jesosy, na dia misy tsipiriany maro tsy fantatsika aza. Ny fiheverantsika azy izao anefa no zava-dehibe kokoa noho ny fahalalana hoe hoatran’ny ahoana marina ny bika aman’endriny.
“KELY SISA DIA TSY HAHITA AHY INTSONY IZAO TONTOLO IZAO”
Maty i Jesosy ary nalevina, tamin’ny andro nilazany an’ireo teny ireo. (Jaona 14:19) Nanome ny ainy “ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro” izy. (Matio 20:28) Nanangana azy ho “fanahy” Andriamanitra tamin’ny andro fahatelo, ary “namela azy hiseho” tamin’ny mpianany sasany. (1 Petera 3:18; Asan’ny Apostoly 10:40) Nanao ahoana ny bika aman’endrik’i Jesosy tamin’izay? Tsy nitovy tamin’ny teo aloha, satria na ny mpianany akaiky aza tsy tonga dia nahalala azy. Noheverin’i Maria Magdalena fa mpanao zaridaina izy. Ireo mpianatra roa teny an-dalana ho any Emaosy kosa nihevitra azy ho vahiny.—Lioka 24:13-18; Jaona 20:1, 14, 15.
Ahoana àry no tokony hiheverantsika an’i Jesosy izao? Nahazo fahitana momba azy ny apostoly Jaona, 60 taona mahery taorian’ny nahafatesan’i Jesosy. Tsy olona teo amin’ny hazo fijaliana no hitany, fa ilay “Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo.” Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy, ary ho resiny tsy ho ela ireo fahavalon’Andriamanitra, na demonia izany na olona. Hotahiny mandrakizay ny olombelona aorian’izay.—Apokalypsy 19:16; 21:3, 4.
Afaka manova ny fiainanao ny fampianaran’i Jesosy sy ny zavatra nataony, izay hita ao amin’ny Filazantsara.